Otú ọ dị, nnukwu ihe kpatara ya bụ n'ihi na ekwetaghị m na ọchịchọ ndị na-enweghị atụ maka ndị mmepe ga-adịgide.
Akụkụ ọzọ nke teknụzụ dijitalụ nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa ọganihu ọ bụla anyị hụtụrụla n'ime obere oge. Nnukwu ụlọ ọrụ na-etolite ịdọrọ na dobe (enweghị koodu ma ọ bụ enweghị koodu) nke dị mma. Ohere maka sistemụ a enweghị njedebe n'ihi na ndị isi azụmaahịa agaghị achọ ụlọ ọrụ mmepe iji weta ihe ngwọta ha site na ihe osise na akwa nhicha site na ngwa zuru ezu.
Ngwa a jikọtara ya na Google Sheets, mana ị nwere ike iwekọta isi data ọ bụla ịchọrọ.